Procurement | Ministry of Electricity and energy
မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း )
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ ရေနံဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ သယ်ပို့ဖြန့်ဖြူး ရေး ဌာနပိုင် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်တင်တွဲ L.P-101, L.P-102, L.P-104 တွဲ(၃)တွဲ၊ တွန်းရေယာဉ် ဆင်ပြောင်(၁၇) နှင့် ဆီတွဲ အမှတ် ဆ-၈၀၁၂ တို့အား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်း နိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ( ၁/၂၀၁၈)
၁။ မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ HSD ဒီဇယ်ဆီ 2,273,000. ±5% Ltrs ကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တာချီလိတ်မြို့ရှိ မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင် ဆီဖလှယ်ကွင်းအရောက် ဤလုပ်ငန်းမှ သတ်မှတ်ထားသော ဆီတင်ယာဉ်များသို့ စနစ်တကျ ဆီဖလှယ်ပေးခြင်းအပါအဝင်(DDP) ဈေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်၍ လက်ရှိ ဒီဇယ်ဆီဖြန့်ဖြူး ရောင်းချနေသော ဒေသခံကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည့်အပြင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်အတွင်း
၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ​ရွှေကျင်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံအတွက် ​အောက်ဖော်ပြပါ စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအား (DDP Paung Laung) အရောက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူလိုပါသည်-
HYDRO POWER GENERATION ENTERPRISE
Friday, February 9, 2018 - 12:00
မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) (၁ / ၂၀၁၈)
၁။ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါ ရေနံတူးဖေါ် / ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။
အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း၊ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်း (Invitation to Quote)
၁။ အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ မော်တော်ယာဉ်များကို မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyat) ဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသည်-
Advertising for Car.pdf
Invitation to Bid for Rental Power Generation Plant in Kyaukse Region (EPGE G-02/2017-2018) and Myingyan Region (EPGE G-01/2017-2018)
Electric Power Generation Enterprise (EPGE) seeks to invite tender for the purchasing of electricity on Rental basis in Kyaukse Region and Myingyan Region.
The concession period for the power plant shall be5(five) years from commercial operation date (COD).
Kyaukse (GEPGE G-02).pdf
Myingyan (GEPGE G-01).pdf
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ အမှတ်(၁)ရေနံချက်စက်ရုံ(သန်လျင်) နှင့် ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံစု(သံပရာကန်)မှ အောက်ဖော်ပြပါ ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို (မြန်မာကျပ်ငွေ) ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်ပြီးယူရီး ယားဓာတ်မြေသြဇာများနှင့် (၁)လအတွင်း ထပ်မံထွက်ရှိမည့် ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာများကို (၁)လ အတွင်းထုတ်ယူသည့်စနစ်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာ တင် သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -
၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ အလုံ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် အောက်ဖော်အပြပါ စက်ပစ္စည်းများ၀ယ်ယူခြင်းအား (DDP At Site) အရောက် မြန်မာကျပ်ငွေများဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
Decipline of Tender.pdf